Bogga ugu weyn Waa maxay Caymiska Canshuurta ee Premium? Sidee U Shaqeeya?
Sharciga canshuuraha Mareykanka wuxuu u diyaariyaa shaqsiyaadka iyo qoysaska u qalma ee dib u soo celinta canshuur celinta si ay u kafaala qaadaan iibsashada qorshooyin caafimaad oo tayo leh. Waxay ka mid yihiin qorshayaasha lagu bixiyo isweydaarsiga faa'iidooyinka caafimaadka ee dawladda dhexe iyo gobolka.
Caymiska canshuurta premium waxaa guud ahaan horay loo sii siyaa caymiyaha soo saaraya qorshaha u qalma sida PTC, ama APTC.
Maqaalkan, waxaan ku qeexi doonaa deynta canshuurta premium iyo sidoo kale waxaan si faahfaahsan u sharaxi doonaa sida ay u shaqeyso.
Waa maxay Caymiska Canshuurta ee Premium?
Fahamka Lacagta Canshuurta ee Premium (PTC)
Ma tahay Gunnada Cashuuraha Bilaashka ah ee Qof kasta?
Foomka IRS 8962: Lacagta Canshuurta ee Premium
Yaa u qalma in uu buuxiyo foomka IRS Form 8962 Lacagta Canshuurta Lacagta ah?
Sidee buu u shaqeeyaa Lacagta Caymiska ee Lacagta Caymiska ah?
Heshiinta Lacagta Hormarsan iyo Dib-u-heshiisiinta
Sidoo kale loo yaqaan PTC, credit tax credit waa credit dib loo soo celin karo taasoo u sahlaysa shaqsiyaadka iyo qoysaska u qalma inay daboolaan khidmadaha caymiska caafimaadka ay ku iibsadeen Caymiska Caafimaadka Suuqa. Waxa aad si toos ah ugu bixin kartaa shirkadda caymiska daryeelka caafimaadka si aad isaga ilaaliso kharashka khidmadaha caymiska caafimaadka ee bisha.
Intaa waxaa dheer, credit credit waxaa lagu soo bandhigay US 2014 by Adeegga Dakhliga Gudaha (IRS) ujeedaduna waa in lagu daboolo caymiska caafimaadka 18 milyan oo qoys oo Maraykan ah oo dakhligoodu dhexe yahay. Si aad ugu qalanto credit-ka premium tax credit, waa inaad buuxisaa shuruudaha qaarkood oo aad xeraysato canshuur celin.
Guud ahaan, credit tax credit premium cansh credit waxaa loo sii hormariyaa caymis bixiyaha soo saara qorshaha u qalma sida PTC lacag hormaris ah ama si fudud APTC. Caymisku waxa uu APTC ka helayaa bil kasta marka loo eego khidmadaha qorshayaasha lagu bixiyo suuqa caymiska caafimaadka.
Sababaha qaar, qaar ka mid ah shakhsiyaadka u qalma ayaa laga yaabaa inay doortaan inay ka bixiyaan khidmadaha lacagtooda oo ay dalbadaan PTC dhammaadka sanadka canshuurta. Waa beddelka ka faa'iidaysiga APTC.
Haddi ay tahay APTC oo lagu siiyay ama aad sheegatay PTC dhamaadka sanadka, waa in aad fayl garaysa IRS Form 8962.
AKHRISO: Waa maxay buundada credit aad u baahan tahay si aad u kiraysato baabuur?
The Premium Tax Credit waxaa codsan kara qof kasta. Si kastaba ha ahaatee, shakhsiyaadka xaaska ah ee xareeya soo celinta wadajirka ah, iyo sidoo kale shakhsiyaadka keligood ah ee xereynaya soo celintooda, waxay u qalmaan Lacagta Canshuurta Lacagta ah. Tani waxay suurtogal noqon kartaa oo kaliya ilaa inta iyaga iyo qorshayaashooda caymisku ay buuxinayaan shuruudaha dheeraadka ah.
Dhanka kale, shakhsiyaadka ku qoran liiska ku-tiirsanaanta soo celinta iyo shakhsiyaadka isqabta ee si gooni gooni ah u fayl-gareya uma qalmaan Lacagta Canshuurta Lacagta ah. Hase yeeshee, waxa jira ka-reebis gaar ah oo la siiyo dhibanayaasha xadgudubka guriga ama kuwa ay ka tageen xaaskooda iyo sidoo kale kuwa ku hoos jira qaybta guurka laakiin ku nool si gooni ah iyada oo la raacayo madaxa xeerarka qoyska.
Guud ahaan, si aad ugu qalanto PTC, dakhliga qoyskaaga waa inuu helaa 100% ee khadka fakhriga ee federaalka tirada qoyskaaga. Si kastaba ha ahaatee, waa in aanay ka badan 400%.
Intaa waxaa dheer, dakhliga qoyska waxaa lagu qeexaa inuu yahay dakhliga guud ee la hagaajiyay (MAGI). Xisaabinta waxaa lagu sameeyaa iyada oo dib loogu daro dakhliga aan la cashuurin (sida dulsaarka cashuurta laga dhaafo), cadadka dakhliga laga dhaafo muwaadiniinta ku nool dalka dibadiisa, iyo jajab aan la cashuurin Social Security faa'iidooyinka, ee dakhligaaga guud ee la hagaajin karo (AGI).
Akhri ALSO: Sababta Ganacsi kastaa ugu baahan yahay Garyaqaanka Canshuurta 2022 | Waa In La Akhriyo
Foomka IRS 8962: Canshuurta Lacagta ah Credit
Foomkan waxa loo isticmaalayaa xisaabinta qaddarka qaddarka cashuurta caymiska ee aad u qalanto inaad hesho haddii aad bixisay khidmad caymiska caafimaadka oo laga soo gatay Suuqa Caymiska Caafimaadka. Markaad dalbato PTC, waxay kuu horseedi kartaa dhimista masuuliyadaada cashuurta sanadka.
Waxaa intaa dheer, buuxinta Foomka 8962 waxay kuu sheegi doontaa qaddarka credit ee aad u qalanto inaad hesho ama haddii aad wax lacag ah ku leedahay IRS sababtoo ah helitaanka wax badan oo APTC ah.
Haddii aad ka soo iibsatay caymiska caafimaadka suuqa caymiska caafimaadka ee sharciga daryeelka la awoodi karo, waxa kaliya ee aad u baahan doonto waa inaad buuxiso IRS Form 8962. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad leedahay caymis caafimaad oo sax ah shaqada ama aad si toos ah uga iibsatay caymiska caafimaadka shirkad caymis ah. ka baxsan sarrifka, uma baahnid foomka si aad u buuxiso xaraynta cashuurtaada.
Si la mid ah muhiim, haddii aad ka heshay Foomka 1095-B ee shirkaddaada caymiska ama foomka 1095-C ee loo-shaqeeyahaaga, uma baahnid inaad buuxiso Foom 8962.
Hubaal, credit tax credit waxay yaraynaysaa khidmadahaaga inta badan siyaasadaha Suuqa Caymiska Caafimaadka. Qadarka aad ka heli karto credit credit-kaaga ayaa laga yaabaa, inta badan, waxay ku xiran tahay qorshayaasha caafimaadka ee degaankaaga.
Sidoo kale, goobta suuqu waxay qeexi doontaa tabaruca la filayo ee lagaaga baahan yahay inaad bixiso ee khuseeya khidmadaha qorshaha cabbirka dhexdhexaadka ah (Silver). Sidoo kale, tabaruca la filayo wuxuu ku kordhi doonaa miisaan hoos u dhac, iyadoo ku xiran dakhligaaga sanadka soo socda.
Tusaale ahaan, haddii dakhligaagu u dhexeeyo heerka faqriga iyo 150% heerka faqriga, tabaruca la filayo ee lagaa filayo inaad bixiso ee ku saabsan qorshaha bartilmaameedku waa $0. Intaa waxaa dheer, haddii dakhligaagu uu gaaro 400% heerka faqriga, waxa lagaa rabo inaad bixiso ee ku saabsan bartilmaameedka waa 8.5% dakhligaaga.
Sidaa darteed, kala duwanaanshaha u dhexeeya khidmadaha qorshaha bartilmaameedka iyo wax ku biirintaada la filayo waa qaddarka credit credit. Waa inaadan bixin wax ka badan khidmadaha dhabta ah ee canshuurta. Suuqa ayaa ku ogeysiin doona waxa uu yahay qadarka dollarka. Qadarka waxa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo qorshaha Bronze, Silver, Gold, ama Platinum ee uu Suuqyadu bixiyo. Sidoo kale, amaahda looma isticmaali karo in lagu bixiyo qorshaha Musiibada.
Waa dhamaadka sanadka marka aad u baahan doonto inaad dalbato dhibcaha cashuurta premium. Sidoo kale, waxaad codsan kartaa credit tax credit oo horumarsan, marka loo eego qiyaasta dakhligaaga sanadka soo socda. Haddii aad doorato inaad hesho credit premium horumarsan, bil kasta, dawladdu waxay si toos ah ugu diri doontaa 1/12 ee deynta shirkaddaada caymiska. Si kastaba ha ahaatee, waxaad noqon doontaa qofka u adeega inta ka hartay lacagta caymiska.
Waxaa kaloo muhiim ah in la ogaado in marka aad codsatid credit tax credit ee muddada Diiwaangelinta Furan, laga yaabo inaadan hubin waxa dakhligaaga sannadka uu noqon doono. Waxay, markaas, ka dhigan tahay inaad codsan doonto iyadoo ku xiran odoroska aad samaysay. Hagaagsan ka hor, wakhtiga aad xarayso cashuur celintaada, Adeegga Dakhliga Gudaha ayaa samayn doona is barbar dhig u dhexeeya dakhligaaga dhabta ah iyo caddadka cashuurta ceymiska ee aad markii hore sheegtay.
Haddi sabab kastaba ha ahaatee, aad si khaldan u qiimeyso dakhligaaga oo aad sheegato credit tax credit in ka badan, waxa ay la macno tahay in aad dib u bixin doonto qayb ama dhamaan kala duwanaanshaha. Si la mid ah, haddii aadan helin dhammaan credit-ka canshuurta premium ee aad xaq u leedahay sanadka dhexdiisa, waxaad xaq u leedahay inaad dalbato faraqa marka aad xereyso canshuur celintaada. Natiijo ahaan, waa inaad u soo sheegtaa wixii isbeddel ah ee dakhligaaga inta lagu jiro sannadkaas suuqa. Taasi waxay kuu fududaynaysaa in deymahaaga la hagaajiyo oo waxaad dhinac mari kartaa lacag celin kasta oo weyn dhamaadka sanadka.
Akhri ALSO: 9 Siyaabood oo Fudud oo Loo Isticmaali Kaarka Amaahda
Sida kor ku xusan, credits tax credits waxay ku salaysan yihiin dakhliga qoyska ee sanadka canshuurta la bixiyo. Laakiin dhammaan dhibcooyinka waxaa la xisaabiyaa sanadka soo socda marka qoysku xereeyo canshuur celinta dakhliga. Intaa waxaa dheer, Khasnadda ayaa la og yahay in ay u soo dirto lacag-bixinno qaddarin qaddarin ah shirkadda caymiska. Natiijo ahaan, qoysku kaliya waxay bixiyaan khidmadaha ugu yar. Hormarin bixinta credits waxay ku xiran tahay dakhliga la qiyaasay waxayna caadi ahaan ka timaadaa canshuur celintii hore ee la xareeyay kahor diiwaangelinta caymiska caafimaadka.
Sidoo kale, haddii dakhliga dhabta ah ee sannadka isdiiwaangelinta aanu ku ekayn dakhliga la saadaaliyay, qoysaska waxa la siinayaa qaddar credit dheeraad ah wakhtiga ay xeraynayaan soo celintooda. Dhanka kale, haddii dakhliga dhabta ah uu ka bato dakhliga la saadaaliyay, qoysaska ka badan kuwa la saadaaliyay dakhliga, qoyska waxaa laga filayaa inay dib u bixiyaan qayb ama dhammaan deynta horumarsan.
Inta badan fayl-bixiyeyaasha dakhligoodu hooseeyo, lacag-bixinta dib-u-heshiisiintu waxay yaraynaysaa lacagaha canshuurta halkii ay u baahnaan lahaayeen lacag-bixin dheeraad ah. Dib-u-heshiisiinta cashuur celinta waxay u badan tahay inay u soo bandhigto dhibaatooyin qoysaska qaarkood ee hela credit premium credit in kasta oo ayan haysanin bixinta cashuurta. Tani waa sababta oo ah dhowr qoys oo dakhligoodu yar yahay ayaa koray si ay ugu tiirsanaadaan lacag-celinta canshuurta si ay u xalliyaan baahiyahooda aasaasiga ah.
Inta badan Su’aalaha la Weydiiyo
Miyaan u isticmaali karaa credit-ka canshuurta premium si loo yareeyo kharashka qorshe kasta oo caafimaadka Marketplace?
Waxaad ka dalban kartaa credit-ka cashuurta khidmadaha ah qorshe kasta oo Bronze, Silver, Dahab ah, ama Platinum ah oo Suuqa uu u soo bandhigay. Sidaas oo ay tahay, ma codsan kartid credits cashuurta caymiska qorshayaasha Catastrophic ama qorshayaasha ilkaha ee goonida ah.
Waa maxay goobta suuqa caymiska caafimaadka?
Sidoo kale loo yaqaan Suuqa, Suuqa Caymiska Caafimaadka waa meesha lagu wadaago macluumaadka ku saabsan qorshooyinka caymiska caafimaadka gaarka ah. Waxa kale oo aad iibsan doontaa caymis caafimaad oo aad ka heli doontaa caawimo khidmadaha iyo kharashyada jeebka ka baxsan haddii aad u qalanto.
Yaa xaq u leh credit-ka canshuurta premium?
Waxaad u qalantaa credit tax credit haddii aad: Hayso dakhliga qoyska ee ku dhaca xadka go'an, Ha xarayn fayl-guura si gooni ah canshuur celinta, ilaa aad hoos ugu dhacayso kooxaynta dhibanayaasha rabshada guriga ama dayaca xaaska, aadan sheegan karin sida ku tiirsan.
Waa maxay xadka dakhligu?
Dakhligaagu wuxuu ahaan doonaa ugu yaraan 100% laakiin waa inuusan ka badnaan 400% khadka fakhriga ee qoyskaaga.
Waa ayo xubin qoyska ka tirsan marka la eego credit tax credit?
Qoyskaagu waxa uu ka kooban yahay naftaada, xaaskaaga, iyo qof kasta oo kale oo aad sheegato in aad ku tiirsan tahay. Taas macnaheedu waa, tirada qoyskaagu waa tirada shakhsiyaadka qoyskaaga.
Caymiska cashuurta ee loo yaqaan 'premium tax credit' waxay adiga iyo qoyskaaga kaa caawinaysaa inaad daboosho khidmadaha caymiskaaga caafimaadka oo aad ka soo iibsateen Suuqa Caymiska Caafimaadka. Waxaan aaminsanahay in qodobkan, aad ku ogaan doonto waxa la sameeyo si loo buuxiyo shuruudaha.
Abaalmarinta Canshuurta Lacagta
Waa maxay credit Tax Credits?
Sidee buu u shaqeeyaa lacagta cashuurta ee Premium?
Su'aalo iyo jawaabo ku saabsan credit Tax Credits
Sababta Ganacsi kastaa ugu baahan yahay Garyaqaanka Canshuurta 2022 | Waa In La Akhriyo
Sidee Cashuuraha Roth IRA u shaqeeyaan
Dib -u -eegista TaxHawk Sanadka 2022: Software -ka Xereynta Canshuurta ugu Fiican | Sharci Ama Fadeexad
10 Dariiqo oo ku Saabsan Sida Loo Bixiyo Canshuur Yar 2022 | Sirta Gudaha
Sida Loo Bilaabo Meherad Washington 2022: Habka Tallaabo-Tallaabo ah
Washington waa caasimadda Mareykanka iyo sidoo kale xarunta la deggan yahay ee Aqalka Cad. Sababtoo ah…
Hindiya, ganacsiga elektaroonigga ah ayaa beddelay habka ay dadku u ganacsadaan. Laga soo bilaabo US $ 38.5 ee 2017, ganacsiga e-commerce ee Hindiya…
Sida ganacsi looga bilaabo Montana 2022: Tusaha ugu dambeeya, Tallaabo-tallaabo
Iyada oo Montanta ay ku jirto darajada 30-aad ee ka mid ah gobollada ugu wanaagsan ganacsiga Mareykanka, ka ganacsiga gobolka…